Burcad Madaxfurasho Ku Doonaysa Sawiro Dhakhtar Ay Ka Xadeen – Heemaal News Network
Shirkadda Hospital Group, oo ay ku xiran yihiin dad badan oo caan ah, ayaa xaqiijiyay weerarka madax furashada ah.
Wuxuu isbitaalku sheegay inay arrintan ku wargeliyeen waaxaha ay quseyso.
Shirkadda Hospital Group ayaa war ay soo saartay ku tiri: “Waxaan xaqiijineynaa in hannaankeenna internet-ka la jabsaday.
Xogta kaararka lacagta bukaannadeenna lama xadin balse hadda, waxaan ognahay in qaar ka mid ah xogta shakhsiyadeed ee bukaannadeenna la helay.”
Waxaa lla ogyahay in sawirro badan oo hore iyo hadda ah aysan ku jirin wejiyada bukaannada.
Mid ka mid ah macaamiisha shirkadda ayaa BBC-da u sheegay inuu ka walaacsan yahay in sawirradii iyo xogtiisa ay ku jiraan gacanta buracadda.
Simon Hails ayaa qalliinka yareynta xabadka ka soo sameystay Hospital Group. wuxuu sheegay in shirkaddu aysan ku wargelin madax furashada.
“Farriin ayaan ka helay Hospital Group ay iguw argelinayaan xogta la xaday balse wax faahfaahin ah lagama bixin nooca xogta,” ayuu u sheegay BBC-da.
REvil, oo sidoo kale loo yaqaanno Sodinokibi, waa mid ka mid ah buracadda ugu weyne e madax furashada dalbada.
Somaliland Oo Kumanaan Kun Dollar ku Bixisay Qorsho ay Baraha Bulshada ka Waddo.